चीनमा प्रचण्ड के गर्दैछन् ? «
चीनमा प्रचण्ड के गर्दैछन् ?
प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७५, सोमबार १४:१७
काठमाडौँ । चार दिने चीन भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले घुमघाममा ब्यस्त छन् ।
‘नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । यो बेला नेपालको बिकास गर्ने बेला हो’, उनले भने, ‘चीन र नेपालका बीचमा चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने ट्रेड एण्ड टुरिष्ट सम्झौता भएको छ । यो नेपाल र चीनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ ।’ यो खबर अन्नपूर्णपोष्टले लेखेको छ ।